सोमत नभएको केटो ! :: Setopati
शोभा शर्मा भदौ ३१
'कस्तो सोमत नभएको केटा रैछ,' घाँटीघाँटी आइसकेको वचन मैले रुद्रघन्टीमै रोकेँ।
सानैमा जब हामी दिदीबहिनी त्यसरी नै खुट्टा फैलाएर बस्थ्यौं, हजुरआमाले 'कसरी बसेको हो, सोमत पनि छैन?' भन्नेबित्तिकै खुम्च्याउँथ्यौं।
म 'सोमत नभएको केटा' को छेउमा बस्नुपर्‍यो। बस्दाबस्दै मैले भनिहालेँ 'तपाईं अलि राम्ररी बस्नु है।' उसको ज्यान र खुट्टा दुवै चलमलाए।
तर अहँ, त्यो सार्वजनिक टेम्पोमा भेटिएको केटाले आफ्ना दुई खुट्टा नजिक लगेन। उसका खुट्टा मेरै खुट्टासँग ढेस्सिए। उसैगरी फैलिए। उसलाई हजुरआमाले कहिलै 'कसरी बसेको, सोमत नभएको केटा!' भनिनन् होला।
दोस्रोपटक मैले अलि चर्को भनेँ, 'हेर्नुस् त उतापट्टि सबैले खुट्टा खुम्च्याएरै बस्नुभएको छ। तपाईंले खुट्टा फैलाउँदा हामी सबैलाई गाह्रो भएको छ, त्यत्ति पनि थाहा हुन्न?'
त्यसपछि उसले अलिअलि खुट्टा सम्हाल्यो। खै के सोच्यो, फेरि फैलायो। उसलाई लाग्यो होला 'यो केटीले भनेको मैले किन मान्ने?' 'इगो'को आगो सल्किएको उसको शरीरको हाउभाउ र अनुहारबाटै थाहा हुन्थ्यो।
उसले मलाई हामीले बुझ्ने गरेको 'दुर्व्यवहार' नै त गरेको होइन। तर उसको व्यवहारले मलाई निकै अप्ठ्यारो महशुस भएको थियो। उसले आफ्नो कारणले अर्को मान्छेलाई असहज भइरहेको छ भन्ने बुझिरहेको थिएन। के यो दुर्व्यवहार हैन र?
टेम्पोमा अरू केटीहरूले पनि असहज महशुस गरेको थाहा पाएका बेला मैले आफैंलाई कयौंपटक सोधेकी छु, 'के यो संसार मेरो हो भनेर हामी केटीहरू हुर्किएका छौं त?'
हामीले आमाको पेटमा आएदेखि नै 'छोरी अर्काको घर जाने जात' भनेर सुनिरहेका हुन्छौं।
उसलाई आमाको पेटदेखि नै त्यही सुनाइएको हुन्छ, 'यो संसारै तेरो हो। यहाँ तँलाई फैलिएर बाँच्ने स्वतन्त्रता छ।'
उसकाे हुर्काइ पनि त्यस्तै हुन्छ। ऊ चर्को हाँसोस्, ऊ नाचोस्, गाओस्, रातमा हिँडोस्, त्यो देखेर कसैले 'कस्तो सोमत नभएको' भन्दैन।
उसलाई त अझ फोहोरी शब्द बोल्न र बिग्रिनसमेत यो संसारमा छुट छ। 'केटो मान्छे हो, बोलिहाल्छ नि वा भइहाल्छ नि!'
स्वतन्त्र भएर बाँच्न यो संसारका केटीहरूले धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ। शारीरिक र मानसिक पीडा झेल्नुपर्छ। ती पीडाको तुलनामा 'छेउ वा अगाडिको केटोले खुट्टा फिँजारेर बसिदिँदा' हुने अप्ठ्यारो निकै सामान्य हो।
सायद, त्यसैले धेरै केटीहरूले खुट्टा फैलाएर बसेको केटालाई प्रश्नै गर्दैनन्। 'तिमी त्यसरी खुट्टा फिँजाएर बस्दा मलाई अप्ठ्यारो-असहज भयो' भन्दैनन्। उसका खुट्टा आफ्नासँग जानाजान ढेसिँदा पनि सार्वजनिक सवारीको बाध्यता मानेर चुपचाप बस्छन्।
केटाहरूले सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी शरीर फिँजारेर 'मलाई यसरी बस्ने छुट छ' भनेर कहिलेसम्म सोच्न पाउलान्?
'केटीहरू खुम्चिएर र केटाहरू फैलिएर बस्ने' चलन हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर नै छ। यही दबाब झेलेकी बेलायतको 'ब्ह्राइटन विश्वविद्यालय' पढ्ने एक छात्राले 'फैलिने केटाहरू'का लागि 'उपहार' बनाइदिन्।
लैलाले यो कुर्सीलाई नाम पनि दिएकी छन्, 'फैलिएर बस्ने केटाहरूको समाधान'।
उनको यो डिजाइनले 'बेलमोन्ड अवार्ड' पनि पायो। लैलाले केटीहरूका लागि पनि कुर्सी डिजाइन गरेकी छन् जसमा उनीहरू अलि सहज गरी बस्न सक्छन्।
(यो लेख सेतोपाटीमा पहिलोपटक २०७६ साउन १५ गते प्रकाशित थियो)
लैला लरेलले डिजाइन गरेका कुर्सी
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८, १५:१८:००